တစ်ခါတလေမှာ (တစ်ချို့ဆို အမြဲတမ်းလိုလို) ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်လေးတစ်ခု၊ စိန်ခေါ်မှုလေးတစ်ခုကိုတောင် အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ဘဲ ကျရှုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ငါက အောင်မြင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး၊ မဟုတ်ရင်လည်း နောက်လမှပဲ အောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မယ်၊ ဒါဆိုလည်း နောက်နှစ်မှပေါ့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင် ပျင်းရိခြင်းကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။
ငါ ဘာကြောင့် ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေးလိုက်မိတာလဲ?
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ချင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက်လည်း အကြီးအကျယ်ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဓိက အချက်ပြောရရင် ကျရှုံးရခြင်းက လုံးဝဇွဲမရှိခြင်းပါပဲ။ အကျင့်ဟောင်းတွေကို စွန့်ပစ်ဖို့ ခက်ခဲနေပြီး အသစ်ကို မလုပ်နိုင်ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ လျှင်လျှင်မြန်မြန်ပျင်းလာကြတာပါပဲ။
ဒီအချက်က ပျင်းရိနေတာကို ကျော်လွှားဖို့ နှင့် သင်ဆန္ဒရှိသလောက်အောင်မြင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြေရှင်းက တစ်မိနစ်ခန့်သာရှိပေမယ့် ရလဒ်က တကယ်အထင်ကြီးစရာပါပဲ။ ဒီနည်းပညာကို Kaizen (သို့) တစ်မိနစ်နိယာမလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Kaizen ဆိုတာက ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ ဘဝအတွက် အသုံးတည့်ပြီး လူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ နည်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်တွေကို တိုးတက်စေဖို့ အသုံးချတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကစကားလုံး နှစ်လုံးပါဝင်ပါတယ်။
Kai (Change) နှင့် Zen (Wisdom) ဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံးပါ။ ဆိုလိုတာက သင့်ရဲ့ ဘဝကို အလိုအလျောက်နဲ့ ချက်ချင်းမပြောင်းလဲဘဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပညာရှိစွာပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်အသစ်တွေဟာ သင့်ရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံနှင့် သင့်ရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရလဒ်တွေပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Masaaki Imai က တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပျင်းရိခြင်းကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ Kai Zen နည်းလမ်းကို ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ?
ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုမှာ Kaizen အလေ့အကျင့်ကို self-improvement အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့ အချက်အခြာက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ပိုကောင်းလာစေဖို့နှင့် ပိုတိုးတက်လာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ချင်းစီမှာ တစ်မိနစ်ချင်းစီတိုးတိုးပြီး လေ့လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက တစ်နေ့ကို နာရီဝက်(၃၀မိနစ်) ပိုပြီး လုပ်လိုက်ရတဲ့အခါ တစ်ခုခုကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်လိုက်တာက အရမ်းသိသာလွန်းတာကြောင့် ဆင်ခြေပေးချင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ဘဲ တိုးတက်မှုလည်း ရှိလာစေဖို့ စက္ကန့် (၆၀) ပဲ တိုးပြီး လုပ်ဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးက သုံးမိရင် တကယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ ပျင်းတဲ့လူကတော့ ပျင်းကို ပျင်းတာပါပဲ ။